Instagram Followers Generator ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoFebruwari 28, 2019 0 IiCententarios 7774
I-Instagram sisicelo se-BOM yenethiwekhi yoluntu, yeyona ikhule kakhulu kule minyaka idlulileyo, ifikelela kumakhulu ezigidi zabantu abayisebenzisa kwisiseko sayo somsebenzisi. Ekuqalekeni kwayo yayisisicelo sokufaka, ukwabelana ngeefoto kunye neevidiyo, ukusukela ngo-2012 xa yayithengwa yiFACEBOOK yaqala ukukhula kwayo ngokukhawuleza.
Ukusukela kunyaka we-2103, i-Instagram iqala ukusetyenziswa kwiikhompyuter kwaye iqala ukuphunyezwa kokupapashwa okuxhaswe ngemali, izixhobo ezenza umdla kwiinkampani ezivuma ulawulo oluhle ukuba ziyisebenzise njengendlela ukuthengiswa kwedatha.
Okwangoku, ukuba awukho kwi-instagram "awukho" kwaye nangona kubonakala ngathi iyabaxeka injalo, abalandeli banaliphi na ishishini elinalo, kuya kuba nemveliso ngakumbi. Indlela yokuphila kunye nokufumana abalandeli ngokufanelekileyo? Kulula ukusebenzisa umvelisi ukufumana abalandeli abaninzi kwi-instagram. Okulandelayo siza kukuxelela ukuba njani.
Ezona zixhobo ze-Instagram Followers
Umbono kukufumana abalandeli abaninzi, nokuba unayo i-akhawunti yakho okanye iakhawunti yeshishini, siza kuyiphumeza loo nto ngokusebenzisa umvelisi wabalandeli kwi-instagram yamaphepha okanye iiakhawunti kwiwebhu.
Yeyiphi eyona ndlela efanelekileyo? Oyifumana ikhululekile kakhulu, apha sinceda ubone ukhetho olukhoyo. Masithethe malunga nezicelo (i-App)
Enye yezona zidume kakhulu, kwi-Android, ikuvumela kwinguqulelo yayo yasimahla, ukudibanisa bonke abalandeli bakho kwirejista, oyekile ukukulandela, okulandelayo, iiprofayili, ukuthanda kunye nabalandeli. Kwinguqu yayo ehlawulelweyo unokubona abalandeli, abakuthinteleyo, abalandeli beghost njengeefoto, unokulawula iakhawunti, eyona nto ibaluleke kakhulu ukufezekisa ukulayisha abalandeli abaninzi. Yifumane kwiVenkile yeApple.
Sisicelo esikhawulezayo nesimahla, esinokusifumana kwiVenkile ye App. Olona phawu lwayo luphambili kukuba ilula kwaye inobuntu kwaye imnandi kuba isekwe kusetyenziso lweemali ezibonakalayo ozitshintshisela ukuthanda nokulandela, yenzelwe i-iOS okanye i-Android.
Yenzelwe i-Iphone, sisicelo esikhawulezayo esenziwe ngabalandeli kwaye ungafumana ukulandelwa okuhle (umkhondo) wabalandeli, abo bathumele izicelo, abo sifuna ukubalandela, abo asisabafuni, abo banika izimvo kunye nezikhundla eziphumeleleyo. Sayifumana kwi-AppStore.
Amaphepha kwi-Instagram generator yabalandeli abaninzi
Nangona iApp iyasinceda ukuba sifumane abalandeli abanamaphepha kwiWebhu, siya kufumana umgangatho wabalandeli okanye loluphi uhoyo olufanayo kumlandeli. Ngoku siza kubona amanye amaphepha anokukunceda kwimishini yokwandisa inani labalandeli kwiakhawunti yakho ye-Instagram.
Ilula kakhulu kwaye inobungane, iyakhawuleza, inenguqulo yasimahla onokuyifumana yonke imihla kwaye ngayo ifike kuma-20 okuthandayo kunye nabalandeli abali-10 bemihla ngemihla, into engalunganga kweli phepha kukuba kufuneka uphendule uphando ngedatha yobuqu. Uhlobo oluhlawulelweyo luvela kwi-40 yokuthandwa kweefoto ukuya kuthi ga kwi-2.550 njengedilesi yewebhu www.mrinsta.com Unokuhlawula ngePaypal okanye amakhadi etyala.
Isimahla kwaye iyakhawuleza, kodwa ayisebenzi kakhulu kwaye kuya kufuneka ugcwalise uphononongo, ukongeza ekwabelaneni nge-Twitter kunye ne-Facebbok, ngombono wethu umngcipheko omncinci.
Ngokukhawuleza kakhulu kwaye nobuhlobo, yenza izinto ezenzekileyo kwi-Instagram, inike abalandeli bokwenyani, inesicwangciso seentsuku ezingama-3 sesilingo sasimahla. Inguqulelo ehlawulelweyo inezicwangciso ezine ze-30,90,180, 365, XNUMX kunye neentsuku ezingama-XNUMX zemisebenzi, ii-autofollws, ii-autoOnfollwers, uluhlu olunamacandelo, ii-hashtag ezahluliweyo. Uyifumana kwi- www.speedygraph.co/es
Eli phepha liyacetyiswa kakhulu kuba liyakhawuleza, amaxabiso alungileyo, iintlawulo ezikhuselekileyo, linolwazi kunye nenkonzo yomsebenzisi ukusombulula nakuphi na ukuthandabuza nge-imeyile, inkonzo engaziwayo, Oko kukuthi, abanakubona ukuba uyiqeshile le nkonzo, ngaphandle kwephasiwedi . Kungenxa yeenkampani ezibhalisiweyo kuphela
Kwilizwe jikelele, kubaluleke kakhulu ukuba bakwazi kwaye njengoko sele sinixelele ukuba kukho, ukuba unenkampani okanye unomdla wokwaziwa, sikucebisa kakhulu ukuba usebenzise amaphepha ahlawulelweyo, kuba banikezela ngomgangatho ophezulu kakhulu wabalandeli kunye Banikezela ngenkonzo eqinisekisiweyo yesininzi esikhulu, ke ngoko ukwabiwa kwenxalenye encinci yohlahlo-lwabiwo mali ukunyusa inani labalandeli kukuqinisekisa impumelelo kwiqhinga lakho lokuthengisa, siyaqinisekisa ukuba abalandeli bakho, ukuthanda kunye namagqabaza ayonyuka kakhulu.
IiAkhawunti okanye abalandeli beProfayili Abalandela
Ukuba akazithembi zonke ezi zicelo kodwa usafuna ukufumana abalandeli abaninzi, kukho indlela onokuyifumana ngaphandle kokuhlawula okanye ukusebenzisa nasiphi na isixhobo.
Kwi-Instagram ngokwayo kukho iiakhawunti zikawonke-wonke apho unokulandela abalandeli ngokuthe ngcembe kuneendlela eziqhelekileyo. Beka nje i-tag #Follow4Follow kwi-injini yeHashtag yokukhangela.
Apho uya kufumana uthotho lweeprofayile ze-Instagram apho uya kunikwa abalandeli ngaphandle kotyalo-mali, ukongeza kwaba balandeli. Ziyinyani ze100% yokwenyani. Inkqubo yokufumana abalandeli kwezi akhawunti yile ilandelayo:
I-1.- Beka injini yokukhangela #follow4follow
I-2.- Ngenisa iakhawunti evelisa ukuzithemba okungakumbi
3.- qala ukulandela i-akhawunti oyikhethileyo
4.- kule akhawunti kufuneka ulandele bonke abasebenzisi abakumqolo
I-5- Emva kokulinda imizuzu embalwa. Ezi zilandelayo ziya kuqala ukukulandela
Le nkqubo ihamba kancinci kunokuba usetyenziso lokufumana abalandeli be-instagram, kodwa konke ukuvunywa komngcipheko kuba yonke into isebenza ngokusetyenziswa kwe-Instagram.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka wazi ukuba aba bantu kunqabile ukuba benze olunye unxibelelwano olufana nokuthandwa okanye izimvo, ngaphandle kokuba umxholo wakho ulunge kakhulu, baya kukulandela kuphela.
1 Ezona zixhobo ze-Instagram Followers
1.2 I-TURBO NGOKU
1.3 LANDELA UKUFUNDA
2 Amaphepha kwi-Instagram generator yabalandeli abaninzi
3 IiAkhawunti okanye abalandeli beProfayili Abalandela
I-DM i-Instagram okanye i-Direct Messaging Yintoni kwaye uyisebenzisa njani?
Iingcebiso ze-23 zokuThengisa kwi-Instagram